MADIMIKIRA NASEKURU MAN’ORO | Kwayedza
MADIMIKIRA NASEKURU MAN’ORO
26 Jun, 2014 - 16:06	 2014-06-26T16:11:28+00:00 2014-06-26T16:11:28+00:00 0 Views
RWENDO rwuno tati timbobata nezvekudyidzana kwemadimikira nezvipauro. Chipauro ndiro shoko rinotsanangura mamiriro chaiwo echinhu. Tikatora dimikira rokuti, “Ruwoko rurefu” zvinodudzira munhu anoba.
Shoko rekuti, “rurefu”, chipauro nokuti rinotsanangura mamiriro eruwoko.
Ngatingwarirewo sungavirirano yemazwi nezvipauro zvacho. Zvino chiedzaiwo kurodza dzenyu pfungwa nekunyurura zvipauro zviri mumadimikira ari pazasi pamwe nokuadudzira. Pabasa rekumberi kwemberi vadzidzisi mungaedza kupatsanura mhando dzezvipauro muchiti chipauro cheruvara, chemamiriro kana chedudziramuiti.
1. Kuva mutete – haungaukwanise mutoro.
2. Kudya zvavapfupi nekureba – kuwana zvaunoda nokudzvinyirira vamwe.
3. Kuva nemoyochena – moyo wakanaka.
4. Musha mutema – mumusha uchangobva kufa munhu.
5. Kuva usiku utema – kupusa.
6. Kuudzwa makobvu namatete – kutukirirwa zvinorwadza.
7. Kuchekwa nerakagomara – kurwadziswa.
8. Mutambo watsvuka ropa – zvinhu zvaipa.
9. Kutanda botso – kutambudzwa nemweya waamai vakafa vaine chigumbu.
10. Muroora wekuzvara manyatatu (triplets) – wokuzvara vana vatatu nguva imwe.